Faragelin Noocee Ah Ayey Dowladda Federaalka Ku Heysaa Koonfur Galbeed?! – Goobjoog News
in K/Galbeed, Wararka Dalka, Warbixin Gaar ah
Hadaba, Goobjoog News waxaa ay akhristayaasheeda xusuusineysaa sida ay wax ku bilowdeen iyo halka ay xaaladdu mareyso.
U Yeeridda Xildhibaannada K.Galbeed: Sida ay Goobjoog News u sheegtay Aamino Mursal oo ah murashaxadda keliya ee haween ah oo ku jirta tartanka madaxtinnimada koonfur galbeed, guddoomiyaha golaha shacabka JFS Maxamed Mursal ayaa wuxuu Muqdisho ugu yeeray xildhibaannada koonfur galbeed, shirar wadatashi lagu sheegay ayuu la galay, isaga oo tusiyey daryeel dowladeed waa sida ay hadalka u dhigataye.
Cadaadinta Shariif Xasan: ilo ka tirsan madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa Goobjoog News u xaqiijiyey inay jiraan cadaadis la saaray madaxweyne Shariif Xasan, isagana uu ku fakiray xataa inuu ka tanaasulo tartanka madaxtinnimada koonfur galbeed ee 17-ka bishan!
Qaar ka tirsan murashaxiinta Isbadal-doonka ayaa dhankooda Goobjoog News u sheegay in cadaadiska uu ka yimid odoyaasha dhaqanka, oo aaney dowladda federaalka ah iyo cid kale shaqo ku laheyn!
Faah Faahin: Ciidanka AMISOM Oo Dad Shacab Ah Ku Diley Muqdisho